mmụta na ulo mmuta
Na MCPA anyị nwere usoro ọmụmụ ọhụrụ nke na-achọ ịzụlite 'nwa-ntakịrị'.
A na-akwado ma gbaa ụmụaka aka ịzụlite ihe ọmụma miri emi na nkà dị iche iche na isiokwu dị iche iche, gụnyere nkwurịta okwu na ụkpụrụ.
A na-enyekwa ụmụaka ohere dị iche iche nke 'MCPA' nke na-ewe nke ha mmụta gafere klaasị.
Otu nkuzi mara mma gụnyere ndị ọkachamara na nka, PE, kọmpụta, asụsụ, EAL, SEND na nkwado ọgwụgwọ ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na nwatakịrị ọ bụla na-eme nke ọma na mpaghara niile nke usoro ọmụmụ.
njem na ndị ọbịa na mcpa
Na MCPA anyị chere na ọ dị mkpa ịnweta ohere dị iche iche maka ụmụ anyị. Anyị ghọtara na mmụta abụghị naanị na klaasị, yabụ na-enye ụmụaka ahụmịhe mmụta ọzọ.
Nke a gụnyere njem, ndị ọbịa na ụlọ ọrụ nkuzi na mpụga. Nke a bụ ihe na-eme n'otu afọ ọ bụla:
Njem / ndị ọbịa
Ọkachamara ahụike ma ọ bụ nne na nna (nwere nwa) ileta
Ahụhụ ahụhụ / katapila
Sealife Center (Trafford Center)
Gaa Leta Ụlọ ihe ngosi nka Sayensị na ụlọ ọrụ
Nleta ugbo n'ulo akwukwo
Nleta injin ọkụ
Nleta sitere na ụmụ ahụhụ.
Gaa leta site na otu oge ndị ọrụ ebere ndị agadi.
Ụlọ nsọ Hindu (Aut 1)
Ụlọ nke Clitheroe
Ihe na-akpụ akpụ
Biccy na Brew nwere ochie
Emmeline Pankhurst akpụrụ akpụ (St. Peter Square) na Central ọba akwụkwọ
Ụlọ ihe ngosi dị ala
Ụlọ ihe ngosi nka nke Manchester
Roman nọgidere na Chester
Njem njem nke Manchester
Jorvik Center na York Minster
Ụlọ ọrụ Quarry Bank Mill
Ụlọ ọrụ Jodrell Bank
A Christmas Carol arụmọrụ
Ụlọ ihe ngosi nka uwe ojii GMP
Ụlọ ọrụ Macbeth
Ụlọ Redbank- Ụlọ sensọ
Anụ ụlọ na nleta ụlọ
Gaa na ụlọ ihe nkiri
Chọpụta egwuregwu kacha amasị gị
Bụkuo ukwe mba
Gaa na ogige ahụ
Mụta igwu mmiri
Nọrọ n'ụlọ otu abalị
Rie ihe ị kụrụ
Rigoro nnukwu ugwu
Gaa leta zoo
Mụta gbasara omenala na nkwenkwe ibe gị
Nyere otu obodo aka
Mụta esi nri
Gaa n'ụsọ osimiri ma wuo ụlọ ájá
Gaa leta ọtụtụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ma hụ ha n'anya
Jide ụmụ ahụhụ ma ọ bụ ihe na-akpụ akpụ
Na-abụ abụ ka ọ dịghị onye na-ege ntị
Nweta ego maka ọrụ ebere
Bụrụ onye otu ọbá akwụkwọ
Lekọta anụmanụ anya
Zute, ma kelee onye uwe ojii, onye ọrụ mgbanyụ ọkụ na onye enyemaka ahụike
Mee ọgba aghara
Gaa na ebe a na-anọ efe ofufe
Jikwaa mmefu ego
ndị ọrụ ime obodo
Ndị na-arụ ọrụ obodo bụ otu nke ụmụaka ruru afọ iri. Ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-ekere òkè n'ọtụtụ ihe omume n'ime afọ ma n'ime ma n'èzí ụlọ akwụkwọ.
Ndị ọrụ obodo bụ ọrụ ụmụ amaala nke a na-arụ na njikọ Manchester Communications Academy na Northwards Housing.
Site n'ilekwasị anya na 'Community & Environment' ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ dị ka otu iji kwalite mgbanwe dị mma na ịmepụta na ịzụlite mmekọrịta ntụkwasị obi.
Na-emecha ihe ịma aka dị iche iche, ndị ọrụ na-achịkọta ihe akaebe, n'ụdị dị iche iche, na-enye aka na asambodo ikpeazụ ha; Nke a bụ nzere ASDAN, nke dabara na otu nkeji nke GCSE!
N'ime afọ ahụ, ụmụ akwụkwọ na-emecha ihe dị ka awa 35 nke ọrụ ha nwetara site na egwuregwu / oge nri ehihie; ndị nche nche; ụlọ ọrụ; nleta obodo; ụbọchị ESA (Ihe omume ụlọ akwụkwọ ọzọ) na ụbọchị azụmaahịa, emere na MCA. Ha ga-emekwa atụmatụ na wepụta ọgbakọ n'ụlọ akwụkwọ niile!
Ndị ọrụ obodo na-arụkwa sistemu 'You've been Spotted'; nke a na-amata ma na-eme ememe ụmụaka ndị 'hụrụ anya' na-emere ndị enyi ha ebere, na-elekọta ụlọ akwụkwọ anyị ma ọ bụ na-egosipụta àgwà MCPA Community anyị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụtakwu banyere anyị Urban Crew njem, biko hụ Urban Crew ngalaba na ụlọ akwụkwọ anyị webụsaịtị; gwa Oriakụ Riley (onye isi ndị ọrụ anyị Urban) ma ọ bụ jụọ otu n'ime ndị ọrụ ụgbọ mmiri… ị ga-ahụ ha ka ha yi jaket ndụ ndụ ndụ na-egbuke egbuke & okpu baseball!
Pịa ebe a ka ịhụ otu anyị
SCHOOL kansụl na olu ụmụ akwụkwọ
Na Manchester Communication Primary Academy, anyị kwenyere na mkpa ọ dị inye ụmụaka ohere ka a nụ ya yana ịgba ha ume itinye aka n'ịhazi ọdịnihu nke ụlọ akwụkwọ ha, obodo obodo na ụwa dum.
Voicemụ akwụkwọ na-enye ohere ọzọ maka nwata akwụkwọ ọ bụla iji kparịta mmetụta ha nwere maka ụlọ akwụkwọ - ma n'ọkwa agụmakwụkwọ na nke ọzụzụ atụrụ - iji hụ na ha na-esonye na agụmakwụkwọ ha. A na-agba ụmụ akwụkwọ ọ bụla ume ikwupụta echiche ha, ma soro na-arụsi ọrụ ike na ime mkpebi n'ọtụtụ isiokwu, okwu na mmepe n'ụlọ akwụkwọ.
Anyị chọrọ inye ụmụaka nkà ndị dị mkpa na nduzi na ọmịiko, ka anyị na-azụlite nwa ọ bụla na mmepe ha na àgwà obodo ụlọ akwụkwọ anyị. Ebumnobi anyị bụ ịmepụta obodo dị mma na nsonye n'ime ụlọ akwụkwọ na-akwado ụmụaka maka ohere, ọrụ na ahụmahụ nke ndụ n'ọdịnihu.
Kansụl MCPA bụ ụmụ akwụkwọ iri na abụọ sitere na afọ 2-6 bụ ndị ndị ọgbọ ha họpụtara. Kansụl ụlọ akwụkwọ na-etinye aka n'ọtụtụ akụkụ nke ụlọ akwụkwọ ahụ iji nyere aka mee ka ụlọ akwụkwọ ahụ bụrụ ebe ka mma. Ụmụ akwụkwọ anyị meworo okenye na-anya isi n'ọrụ e nyere ha gụnyere imere ndị nnọchite anya kansụl na-eto eto ka ha ga-esi bụrụ nnukwu ndị kansụl.
Nwa ọ bụla nwere ike ịbụ akụkụ nke Kansụl Ụlọ Akwụkwọ; a na-ahọpụta ha na-eso ntuli aka klaasị onye kwuo uche ya, nke a na-eme na mmalite nke afọ.
Kansụl ụlọ akwụkwọ na-ezukọ otu ugboro n'izu na ndị isi ụlọ akwụkwọ PSHE, bụ ndị na-enyere aka ịkwado nzukọ ha. N'iji echiche sitere na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ, ha na-ahọrọ otu oru ngo n'oge ọ bụla iji rụọ ọrụ na-elekwasị anya na nkwalite ụlọ akwụkwọ, obodo ma ọ bụ ọrụ gburugburu ebe obibi.
Ụmụntakịrị na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta atụmatụ ime ihe, inyefe ọrụ, na-eme mgbakọ ụlọ akwụkwọ dum na inwe nzukọ iji rụọ ọrụ na ọrụ ha.
Site na kansụl ụlọ akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ niile nọ na MCPA nwere ohere iwelite okwu, kesaa echiche na isonye na mkparita ụka nke metụtara ndị ọgbọ ha niile n'inweta usoro ọchịchị onye kwuo uche ya.
ndị enyi na ezinụlọ nke mcpa
Ndị enyi na ezi na ụlọ nke MCPA bụ otu ndị nne na nna na ndị nlekọta bụ ndị site na nkwado nke onye ọrụ ezinaụlọ anyị na otu ezinụlọ GMAT, mee ihe ndị a:
- Hazie ma mee mmemme inye ego maka ụlọ akwụkwọ, ịzụta ihe dịka nkwalite egwuregwu. Ndị a gụnyere abalị ihe nkiri, discos na ahịa.
- Gbaa mmemme ọrụ ebere dịka ire keki Macmillan.
- Jide ụtụtụ kọfị kọfị kwa izu nke na-enye ohere maka ndị nne na nna niile iji netwọk, nweta ọrụ na ime ndị enyi ọhụrụ. N'oge ọgba aghara Covid nke a bụ nke mebere.
Ndị otu a bụ ihe nkịtị, ụfọdụ ndị nne na nna na-abịa ugboro ugboro, ndị ọzọ na-abịakarị mgbe ọ bụla. Ụfọdụ na-akwado mmemme ọ bụla, ụfọdụ na-akwado otu ma ọ bụ abụọ.
Ọ bụrụ na nke a bụ ihe ịchọrọ itinye aka na ya, biko kpọtụrụ onye ọrụ ezinụlọ anyị - Lorraine Carlin.